आज विश्व थाइराइड दिवस, यस्ता छन् यो रोगबाट बच्ने उपायहरु Nepalpatra आज विश्व थाइराइड दिवस, यस्ता छन् यो रोगबाट बच्ने उपायहरु
आज विश्व थाइराइड दिवस, यस्ता छन् यो रोगबाट बच्ने उपायहरु
नवलपुर । आज ११ गते बुधबार May 25, विश्व थाइराइड दिवस । आजै कै दिन देखि विश्वमा छरिएर रहेका मानवको लागि यो कस्तो रोग हो । यसबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने जनचेतना फैलाउनेउद्धेश्यले यो दिवसको रूपमा विश्वभर आजैको दिन थाइराइड दिवस भव्यताका साथ मनाउदै आएका छन् ।
थाइराइड हर्मोन बढ्नुको मुल कारण आयोडिनको कमीले गर्दा हो भन्ने थाइराइड रोग विशेषज्ञको मत देखिन्छ । आज विश्वका अधिकांश देशमा विस्तारै विस्तारै आफ्नो पकड यो रोगले जमाउदै अघि बढेको छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हरेक घरमा आयोडिनयुक्त नुन खाने गरेतापनि माहामारीको रूपमा हरेक घरमा थाइराइड हर्मोनको विरामी वढ्दै गएको हामी देख्न सक्छौं ।
यो रोग कसरी लाग्छ यो रोगबाट बच्न हामीले कस्तो खानपान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा जानकारी हुन सके यो रोगबाट आफ्ना भावी पुस्तालाई बचाउन सकिनेछ । आउनुस यो रोगको बारेमा केही जानकारी प्राप्त गरौं । थाइराइड हर्मोनको खास काम भनेको गति नियन्त्रण गर्न मेटाबोलिजम सिस्टमलाई बलियो बनाउन ठूलो मद्दत गरेको हुन्छ । यो ग्रन्थि घाँटीको अघिल्लो भागमा रुद्रघण्टीको तल रहेको हुन्छ ।
यो ग्रन्थीले थाइरोक्सिन (टी–३) र ट्राइआयोडो थाइरोनीन (टी–४) हर्मोन उत्पादन गर्छ ।थाइराइड भनेको एउटा ग्रन्थी हो । हर्मोन बढी उत्पादन हुनुलाई हाइपर थाइरोइडिज्म् भनिन्छ भने कम हर्मोन उत्पादन गर्ने कामलाई हाइपो थाइरोडिज्म् भनिन्छ ।
यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुराको जानकारी हुन आवश्यक छ । आजकाल हरेक घरमा मधुमेहका रोगी छन् । मधुमेहका रोगीले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउदा वर्षको एक पटक थाइराइडको पनि परीक्षण गर्नुपर्छ । कहिलेकाहिं हाइपर थाइराइडिज्म्मा मधुमेह रोग पनि देखिन सक्छ । यसमा थाइराइड निको हुनासाथ मधुमेह पनि आफै निको भएर जान्छ ।
यस्ता छन् थाइराइड रोग लाग्दा देखिने प्रमुख लक्षणहरू
१. हाइपो थाइराइड भएमा शरिर मोटाउँदै जाने हुन्छ भने हाइपर थाइरोइडमा शरीर दुब्लाउने हुन्छ । यसको असर पुरूषमा भन्दा महिलामा बढी देखिएको हुन्छ ।
२. हाइपो थाइरोइड रोग लाग्दा महिला युवा युवतीहरूको महिनावारी ठिक समयमा नहुने बाझोपनको समस्या देखिन सक्छ ।
३. थाइराइड हुने महिला पुरुषको शरीर चिसो हुने गर्दछ । त्यस्ता व्यक्तिको शरिरको तापक्रम प्रायः नर्मल भन्दा कम देखिन सक्छ ।
४. थाइराइड रोग लागेका महिला पुरुषमा शरीरमा रोग-प्रतिरोधक क्षमता कम़जोर हुदै जान थाल्दछ । इम्यून सिस्टम कमजोर हुने हुनाले कालन्तरमा उसलाई अनेक रोग लाग्ने खतरा बढ्ने हुन्छ ।
५. थाइराइड रोग लागेका व्यक्तिलाई चाडै थकाई लाग्ने समस्या देखिन सक्छ । यस्ता व्यक्ति धेरै आलसि हुने गर्दछन् । त्यस्ता व्यक्तिको शरीरमा ताकत बिलकुल हुदैन ।
६. थाइराइड रोग लागेका व्यक्तिलाई रूघा लागी रहने समस्या देखिएको छ । औषधि सेवन गर्दापनि निको नहुने हुन्छ ।
७. थाइराइडको समस्या भएका महिला पुरुषमा डिप्रेशनमा पुग्ने खतरा बढेको हुन्छ । बिर्सने बानी, काम गर्न जाँगर नलाग्ने, सेक्समा रूचि नलिने जस्ता समस्या देखिन सक्छ ।
नोट : थाइराइड एउटा हर्मोनको गडबडीले बढ्ने घट्ने हुन्छ । यो रोग लागेमा केही बार्नुपर्छ भन्ने छैन । खानाले खायो पनि हुन्छ ।
थाइराइड हर्मोनको सफल उपचार
१. काचनार गुगल २ गोली दिनमा २ पटक २ महिना जति खानुस् ठिक हुन्छ ।
२. अशोगन्धा चूर्ण एक चम्चा दिनमा २ पटक दुधसंग दिने यो उपचार हाइपो थाइरोडिज्म्को केसमा महत्वपूर्ण छ । यस्तो समस्या भएर दुब्लाउँदै गएको अवस्थामा यसले राम्रो फाइदा गर्दछ ।
#रोगबाट बच्ने उपायहरु